Staging Asylum - Izinhlelo ze-Android ku-Google Play
- UMasingana 6, 2015
The eBook isiteji Asylum kuthakwe kuhlanganisa nemidlalo eziyisithupha wesimanje Australian uhlelo ukuphrinta, sinikeza ezahlukene ukulandisa kanye yayihluke on nababhace. Lihlanganisa amabili e-ukujula izingxoxo audio, analysis sociocultural nomlando, kanye amanothi othisha olunzulu '. Umphumela uba nakho zikhethwa nemidlalo sonkana: esiteji futhi ngaphakathi inkulumo on okungagunyaziwe abafuna ukukhoseliswa, izisebenzi zomnyango wofuduko avelelwe, ukulawulwa kwemikhawulo ilungelo ne.
Okuzobe kudlalelwa Asylum: kudlala
Lokhu iqoqo eliyingqayizivele futhi ezihlukahlukene kuhlanganisa:
- CMI (A ezithile Maritime Incident) by version 1.0, a smart, kuyindida umsebenzi izwi nezwi okhuluma Izingane zomkhumbi Affair kanye SIEV X inhlekelele
- The Dark Rainbow by Victoria Carless, a uvuthondaba surreal ezifuywayo mayelana wabavela kwamanye amazwe avelelwe
- The Solution Pacific by Ben Eltham, okuyinto ethatha kusofa cricket ehlaziya njengoba yekuya for a farce mayelana excision kahulumeni Howard insimu yokufuduka
- Halal-el-Mashakel by Linda Jaivin, olubheka ubungane phakathi ababoshwe seekers ezimbili ukukhoseliswa
- Journey of Asylum - Waiting avela nesazi-Catherine Simmonds, uchungechunge ezimfishane esekelwe phezu emphilweni of nababhace abahlala Melbourne
- Nothing But Nothing by Towfiq Al-Qady, i play kwakhe mayelana ebuntwaneni nempi
The isiteji Asylum ithuthukiswa eBook izici:
1. full play script for zonke iziqu eziyisithupha engenhla
2. izihloko Academic from:
- Julian Burnside AO QC, ukuhlola core nezindaba zomthetho, kokubili kazwelonke international, kuthiwa abathintekayo ngalo by izinqubomgomo Australian kukahulumeni mayelana nababhace.
- Kon Karapanagiotidis OAM, nokuhlanganyela amazing impumelelo ngalama Asylum Seeker Resource Centre.
- Judi Moylan, sinezele isihloko ukuthi unikeza umlando ofingqiwe inqubomgomo likahulumeni Australian mayelana nababhace, kusukela mfelandawonye ukwethula day.
- UDkt Joseph Pugliese, ebuka indlela yokuzibulala eyodwa isiboshwa waphunyuka, Habib Waheedy, kuyabonakala ukubonakalisa more ngobubanzi phezu duty yethu zomphakathi nokuzinikela nababhace.
- UDkt Caroline Wake, ehlola ababaleki ukuzimisela inqubo oluthile ukusebenza, lapho the ahlolwa kumele bethule ubufakazi ukuba assessor futhi bobabili amaqembu ngokuvamile idukise futhi ngiyiqonde ngokungeyikho omunye nomunye.
3. izingxoxo Audio:
- Judi Moylan exoxa izinqubomgomo ukufuduka ngesikhathi sakhe njengoba a MP Liberal.
- Morteza Poorvadi ekhuluma mayelana nakho kwakhe siqu befuna ukukhoseliswa, kokuba kokuboshwa iminyaka emine, bese kokuqeda BA in Mathematical Engineering kanye Ifaka in Halal-el-Mashakel at the Adelaide Fringe, okwakubekelwa alengayo zisekelwe ukuyongqwa yakhe at Villawood.
Amanothi 4. Teachers '
UMasingana 6, 2015
Ukuboleka i-eBooks, audiobooks, amahlaya, umculo, ama-movie ne-TV, MAHHALA ngekhadi umtapo!
Barnes & Noble sika imiklomelo ncwadi ukutholakala kanye digital Ukufunda indaba.
Meet Libby. Thola futhi ujabulele eBooks kanye audiobooks kusuka umtapo wangakini.
Ukufunda ama-eBooks zamanje 200-000 akunamkhawulo kuselula Tablet: abafundi ujabule
Bhalisa ukuze uthole $ 5 off eBook lokuqala engcono ku audiobooks. *
Ngamathani eBooks FREE, BookShout kuyinto ekuhambeni kuya ukufunda lokusebenza abathandi incwadi!
Unlimited izincwadi FREE uzoba bathande.
Ebook tutorial indlela ukufaka Windows 7 on a computer, kuba lula ukufunda.
Eliphakeme kunawo LDS Audiobook futhi eBook umtapo wonke amadivayisi akho.
Uboleke eBooks, audiobooks, & yokusakaza ividiyo kusuka wezincwadi wakho usebenzisa bezishishinga.
A umsebenzi ebalulekile emlandweni Australian ukuthi uye emise ubuzwe bethu.